Ngathi-Yiwu Aotian Digital Techology Co., Ltd.
Kubhubhane weSARS, jo-jo inkampani bonke abasebenzi nabo benza imizamo emihle yenkonzo elungileyo, abathengi kwihlabathi liphela xa undwendwe lungena eTshayina, siphendula nge-imeyile, zonke iintlobo zesoftware yengxoxo, ngokukhawuleza, Amajelo awahlukeneyo anika undwendwe ixesha lokuhanjiswa, abasebenzi bejo-jo ziindawo zentengiso ezivulekileyo kuqala, kwaye okokugqibela ukuvalwa emsebenzini, imarike ikwabonelela ngeqonga loku-odola ngokuhlwa, iqonga lokuphila ebusuku, ngothungelwano lubonise ngcono imveliso Ukuze abathengi akufuneki banyamezele ukudinwa kohambo, iimpahla zingahanjiswa kumazwe.
Okwangoku, kudodobala kwezoqoqosho, iphepha leJOJO lisagcina ingqondo elungileyo. Ngelixa kugcinwa ibhalansi yengeniso kunye nenkcitho, iphepha leJOJO ligcina ukwandisa amasimi amatsha kunye neemveliso ezintsha ukwenza iimveliso zawo zahluke ngakumbi kwaye zihlangabezane neemfuno zabathengi.
Inkampani inamathele ngokungaguquguqukiyo "kubungcali, ubungcali, ukuthembeka" kwifilosofi yeshishini, baxhomekeke kumandla okuthengisa abakhethekileyo kunye nenkqubo egqibeleleyo yasemva kwenkonzo, ukusetyenziswa kwenkqubo yolawulo lwamalungiselelo kwangoku sele kwenziwe ukuba kubenamandla apheleleyo, amava olawulo kunye nentengiso evuthiweyo. uthungelwano kunye nokuphucula iinkampani zobuchwephesha obuphezulu.
Ukuprinta iphepha kwiifoto, Iphepha le-Sticker le-Glossy, IPhepha leMifanekiso eliMnyama, Iphepha leT-Shirt, Iphepha lesinyithi leehempe, Iphepha lokuGqithisela elisekuhleni,